La Yaabka Aduunka: Dameer u tartamaya duqa magaalo ka tirsan qaarada Yurub – SBC
La Yaabka Aduunka: Dameer u tartamaya duqa magaalo ka tirsan qaarada Yurub
Dareenka Warbaahinta waxaa si weyn u soo jiitey dhacdo ka socota wadanka Bulgaria ka dib markii koox isbadal doon ah ay shaaca ka qaadeen in duqa magaalada Varna oo ah magaalada sadexaad ee ugu weyn dalkaasi ay u tartansiin doonaan duqa magaaladaasi dpoorashooyinka soo socda.
Kooxdan oo si weyn uga soo horjeeda Mayorka magaalada oo xukunka hayey tan iyo sanadkii 1999-kii ayaa ku eedeeyey mayor Kiril Yordanov in uu yahay shakhsi ku guuldareysatey xafiiska waxaana ay sheegeen inay caradooda ku muujinayaan inay xukunka kula tartansiiyaan dameer.
Ololalayeesha soo bandhigay fikirkan ayaa dadka u sheegaya in intii ay codkooda siin laahaayeen Kiril Yordanov ay tahay in ay u codeeyaan dameerka u taagan doorashada duqa magaalada, iyadoo dameerkan oo lagu magacaabo Marko uu u sharaxan yahay xisbiga New Bulgaria party iyadoo dameerku uu ka qayb galayo doorashada dhacaysa 23-ka October oo ah bisha soo socota.
Angel Dyankov oo ah madaxa gudiga ololaha doorashada dameerka ayaa yiri “Si la mid ah musharaxiinta iyo siyaasiyiinta xilka duqa u tartamaysa dameer Marko wuxuu leeyahay haybad xoogan, ma ahan beenlow, ma ahan tuug wax xada, wuxuuna shaqadiisa u qabtaa sidii loogu tala galay”.
Laakiin mayor Kiril Yordanov wuxuu sheegay inaanu doorashada la istaagi doonin dameer Marko isagoo si caro leh ugu tilmaamay talaabadaasi mid aad dhaqan xumo u ah.
Halkan ka akhri warbixinta oo ay u hadal hayaan saxaafada Bulgeria
kamal haydar says:
Siteenbar 30, 2011 at 7:17 am
sbc ma waxaad rabtaan ayaad dadka u sheegtaan mise wax xaqiiqo ah ayaad soo qortaan
omar hmiid says:
Aktoober 8, 2011 at 8:21 pm
wallahi run ahaanti waa dhacdo la yaab leh sooyalkana aan ku dari doonno
Aktoober 21, 2011 at 11:44 am
wr aniga wxaa ijoga 11 damer hadii ay galan gartan waa cajib wxaan modayaa hadiilahelo dolad cadila waa ikartamaya ayan filayaa
Janaayo 15, 2012 at 5:59 pm
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ilahaynooma keeno dameero tartamaya taak umahaynee
mahad abdala says:
Febraayo 16, 2012 at 11:30 am
wa qiso cajiib ah oo tilmaamaysa nacaybka loo qabo mayorka mar hadii tartanka lala galiyay dameeer kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk